Home Wararka Ciidanka XDS ee Badbaada Qaran oo u Muuqda kuwa Markale loo Baahan...
Ciidanka XDS ee Badbaada Qaran oo u Muuqda kuwa Markale loo Baahan yahay inay Xamar Ku soo Noqdaan
Tan iyo intii ay RW Rooble iyo Mucaridka ka soo horjeeday muddo kordhinta ee dalbanayey in Distuurka lagu dhaqmo ay ku heshiiyeen in la wada hadlo laguna soo laabto sidii loo ambaqaadi lahaa doorshooyink ku saleysan heshiiskii 17ka September 2020, waxaa uu M. Farmjo u beryahan waddo kale oo xagal daacin ah. Farmajo waxaa uu jeexday kii hore ka khatersan oo soo wata dhibaatooyin xoog leh.
Tallaabooyinka khaterta ee uu qaaday , kuwana ay jidka ku soo jiraan waxaa ka mid ah:
Wax lagu sheegay So celinta xiriirkii diplomasiyadeed ee Kenya oo aan xataa markii hore qaab xun loo jaray, haddana la leeyahy qaab ka sii xun ayaa loo soo celiyey, kaas oo u muuqday in dhinaca Kenya ay wax waliba halkeedii ka joogto shalay iyo maanta.
Dacwadda Badda oo la leeyahay waa laga noqonayaa oo waxaa lagu dhameynyaa maxkamadda bannaankeeda, waxaana ay Farmajo iyo Uhuru Kenyata ku saxeexayaan Doxa maalin kadib 21/05/2021 marka uu bilowdo shirka wadahalka DG iyo RW Rooble ee ku aadan Doorashada 20/05/21.
Arrintaan Farmajo waxaa uu uga danleeyahay inuu ku abuuro dhibaatooyin ka culus muddo kordhinta, dhibaatadaan oo aan laga soo waaqsan Karin. Farmajo iyo Fahad oo maalin walba maleegaya qorshooyin khatar ah waxay rabaan in:
In Farmajo uu dacawadda Badda ka noqdo oo uu Kenyna siiyo qeyb ama dhamaan dhul badeedkeenna oo ay nagu qabsatay, iyadoo waliba ka sii qadatay lacago hormaris iyo kiro ah oo uu haddaba dakhli uga socdo taas oo ka timaada shirkado ay ENI ka mid tahay dalka Qadarna uu ku leeyahay saami shirkaddaas.
Inuu ku carqaladeeyo shirka iyo wadahalka ay yeelanayaan RW Rooble iyo DG goboleedyada eek u aadan doorashada iyo sidii loo qaban lahaa.
Isagoo raba inay dadka ku mashquulaan dacwadda Badda si aysan wadahadallada si habsi ah ugu socon ama la gacan bidxeeyo, kadibna uu markale uu Mursal ula noqdo.
Waxaa kaloo uu wadaa inuu sii kala furfuro urrurada Bulshada iyo ganacsatada oo u habeenadaan la kulmaayey isagoo madaxweyne ahayn, ulana dhaqmayey inuu yahay MW waxa kala goyn kara.
Wuxuu sii wadaa beenta ah inuu dalka ka qabanayo Doorasho cod ah haddii uu fashiliyo tan uu hadda RW ka shaqeynayo, iyadoo Xamar shabaab gacanta ku hayaan oo caawaba ku dileen taliyihii Saldhigga Waberi.
Tallaabooyinka uu wado oo dhibaatooyinka badan noola iman doona waxay u baahan yihiin in xoog lagu xalliyo oo Farmajo laga saaro madaxtooyada, waayo waxa uu sameynayo waxay keeni karaan inuu dalka khatar geliyo.
Sidaas darted si dhibaatooyin abuurka Farmajo loo horjoogsado waa in la qaadaa tallaabooyinkan:
In Mucaaridka oo kaashashanaya Ciidanka Xooga dalka ay soo saaraan diginin ah in dalalka Qatar iyo Kenya aysan wax heshiis ah la gelin Karin Farmajo, waxkasta oo ay kula heshiiyaanna ay yihiin wax aan waxba laga soo qaadeyn,heshiis kasta oo uu galaana uusan guntanmeyn maadaama uu ka dhamaaday muddo xileedkii.
In Farmajo lagu khsabo inuu cadeeyo inuu yahay Murashax iyo inkale iyadoo xoog looga saarayo madaxtooyada taladana lagu wareejiyo si KMG ah Maxamed Mursal oo haddii uu diidana la raaciyo Farmajo si KMG ah ahna loogu dhiibi karo cidda sharciga uu ku xijinayo Mursal.
Haddaba qodobadaan waxay keenayaan in dalku aado doorasho loo dhan yahay iyo in aan dowladda soo socotaa loo aburin caqabada ay ku fashilanto sidaas ayna nooga lumaan sannado kale uu dalku wax ku qabsan karay.
Hadiisa maanta la fudueysto oo sida caadada ahayd ee la oran jiray “Farmajo ma sameyn karo” la yiraahdo , waxaa loo tagayaa Farmajo inuu sameeyo wax lala yaabo oo hadda laga hortagi karay, kadibn ay middi calool ku tagto Somaliyana la kala qeybsado, waayo haddii uu sinnaba hogaanka Farmajo ugu soo noqdo waxaa la hubaa in Puntland, Somaliland iyo Jubaland ay mari doonaa jid wadajir ah halkaasna ay ugu dhamaan doonto Somaliya, khasabna ay noqon doonto magaca kale in loo bixiyaa inta isku hartay kuwaas iyagana weligood isa sii dili doona.